Goiana · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Goiana
Barbady03 Febroary 2022
Tohanan'ny CARICOM i Goiàna amin'ilay ady sisintany ifanaovany amin'i Venezoelà
Venezoela27 Janoary 2021
Noho ny faritra iray fitrandrahana solika, mihamafy ny ady tany ifanaovan'i Goiàna sy Venezoelà
Tantara mikasika ny Goiana
Nifamahofaho ny Andro Erantany ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety tao Karaiba
Jamaika 10 Mey 2022
'Miha-mampidi-doza hatrany ny tontolo iasan'ireo mpanao gazety ao Karaiba'
Barbady 02 Desambra 2021
Nivoaka ny lisitr'ireo voafantina amin'ny fetibe literera ao Karaiba andiany taona 2021; betsaka ny mpanoratr'i Trinidad & Tobago voatsonga
Dominika 16 Avrily 2021
“Inona ny boky hafa hiresaka ao anaty boky iray ny “street food” trinidadiana, ny poezian'i Thom Gunn, sy an'i Dylan Thomas miezaka miresaka ny karazan-kira soca?”
Manampy amin'ny fampitsaharana ny fanapahana hazo fingotra efa zato taona any Guyane ny tsindry ataon'ny vahoaka
Fampandrosoana 15 Febroary 2021
"Mbola fampandrosoana ihany koa ny fampandrosoana misy fiheverana ny lova [fitsinjovana ny ampitso]."
Andiana abidy karaibiàna mitokelaka amin'ny TikTok
Trinite sy Tobago 20 Oktobra 2020
Lasa fomba iray entina miatrika ny valanaretina COVID-19 ny hehy sy tokiky, saingy ao anatin'ny vanimpotoana iray mahabe ireo "mpanefy hevitra" aty anaty media sôsialy, mbola misy olona afaka mitaky ny maha-tokamaiavaka ny asany sy ny resaka fizakàmanana ara-tsaina ve?
(2009) Topimaso momba ny Vovonan'i Amerika
Amerika Avaratra 18 Septambra 2020
Raha efa akaiky ny fanokafana ny Vovonan'i Amerika Fahadimy ahitana mpitondra miisa 34 avy amin'ny Ila Bolantany Andrefana hiara-midinika ny olana mifandraika amin'ny fanambinan'ny olombelona, ​​ny tontolo iainana lovainjafy ary ny fiarovana ny angovo, ary mazava ho azy ny krizy ara-bola manerantany dia nanohy nanara-maso akaiky ny fivoaran'izany ireo bilaogeran'ny renim-paritra.
Karaiba : Momba ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety
Amerika Latina 05 Septambra 2020
Ry mpanao gazety [...], rehefa fankalazana ny andron'ny 3 May, Andro Erantany ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety, manantena aho fa ho tsaroanareo ny fomba niainanareo am-pilaminana teto
Ny famerenana fanisàna vato no hilaza ny vokatry ny fifidianana tao Goiàna hoy ny Fitsarana Antampony
Fifidianana 31 Jolay 2020
Natao tamin'ny 2 Martsa ny fifidianana solombavambahoaka tao Goiàna. Ankehitriny, nandidy ny fitsarana antampony fa tsy maintsy mametraka ny tatitra ofisialy avy aminy ary mifanaraka amin'izay vokatry ny famerenana nanisa vatompifidianana ny Tale Jeneraly misahana ny fifidianana.